Manana iray hafa izahay: Olon-jiolahy iray niova fo ho silamo, mpanao politika PVV (AIVD-er) Joram van Klaveren: Martin Vrijland
Manana iray hafa isika: ny Holandey niova ho Islam, mpanao politika PVV (AIVD-er) Joram van Klaveren
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Febroary 2019	• 4 Comments
Ao amin'ny lisitr'ireo teratany fotsy izay niova fo ho silamo ary maka sary an-tsaina ny politika na ny fampahalalam-baovao, dia afaka manampy kintana vaovao (AIVD) efa nampiofanana: Joram van Klaveren. Izy dia lehilahy PVV efa ela izay te hanoratra boky iray (satria manana fotoana ny mpanao politika) momba ny maha-zava-doza ny finoana silamo. Na izany aza anefa dia hitany fa marina ny finoana silamo noho ny finoany taloha, ny kristianisma. Hitan'i Joram fa tsy maintsy somary adala ianao raha te hijanona ho Kristiana ary dia lasa izy! Fantatro ireo silamo mientanentana izay mankalaza ny moskey ankehitriny mba hankalaza ny fandresen-dahatra ny finoany, fa izany no mampiseho ny naivety lehibe indrindra azonao eritreretina.
Ho an'ny fanombohana, mety ilaina ny mahafantatra fa miaina amin'ny zava-misy marina momba an'i Trumanshow (sur) ianao. Izany dia ilaina ny mahita fa demokrasia dia sarotra. Tsy misy ny demokrasia: misy ny fisehoan'ny demaokrasia. Ary izany dia mihazona ambony amin'ireo mpilalao fanta-daza izay fantatsika ho mpanao politika amin'ny fiainana andavanandro. Ny klioba izay mipetraka ao The Hague sy Bruxelles dia mitazona ny fahitana azy velona amin'ny fanehoana ny tsirony samihafa ao amin'ny fiarahamonina (ary indraindray manova ny tsirony). Manao izany ianao amin'ny fandrefesana tarehimarika mijery sy mandanja ny angon-tseraseran'ny media sosialy (sy ny Big Data bebe kokoa). Ny fitantanana ny fahatsapana - na ny mamorona sary iray manerana izao tontolo izao - dia ny fampitam-baovao. Miara-miasa amin'ireo mpanao politika izy ireo mba hanome anao sary mahatsikaiky momba ny zava-misy. Ny zava-misy dia ny lalàna vaovao napetraka eo amin'ny sehatry ny fivondronana izay hitarika ho amin'ny faneriterena bebe kokoa sy henjana bebe kokoa amin'ny vahoaka. Mihamaro hatrany ny polisy misedra olana vokatry ny tenany ary mihamaro ny olona miasa amin'ny fanjakana, ka miankina amin'izany ary tsy sahy manakiana.
Noho izany, ny mpanao politika dia manohana ny fisainana safidy, hany ka manana fahatsapana hatrany ianao fa misy mpanao politika na antoko maneho ny tsironao. Ity fanoharana demaokratika ity dia mitazona ny olona amin'ny fanamarinana ary miantoka fa manohy mandeha araka ny tokony ho izy ny andevo ary tsy mikomy. Eto ary isika dia miasa ihany koa amin'ny vondrona mpanohitra sy vondrona. Ankavia, ankavanana, Pegida, Antifa, akanjo volom-borona (ary ankehitriny koa) mavo volo; vondrona fihetsika ho an'ny vondrona fihetsika mifanohitra amin'ny. Izy rehetra dia voatendry avy any amin'ny z. Tsy mino an'izany ve ianao? Avy eo dia ataovy fikarohana ao amin'ilay tranokala mba ho ohatra 'Pegida' na 'zaanse vloggers' ary ohatra marobe izay naverina nodinihina teto, izay ahitana porofo mazava fa ny ara-bakiteny dia voarindra ara-bakiteny.
Izany orchestration ilaina mba hanao ny etona avy amin'ny etona raha ny tsy fahafaham-po eo amin'ny fiaraha-monina. Indraindray mifoha ianao fa tsy fahafaham-po na dia hosakanana aloha tsy mba hahafahanao mifehy ny dingana rehetra avy mihitsy aza ny fakany, ary mifehy ny fivoarana sy ny fametrahana ny poizina efa hanao ny hazo marary toy tianao, milatsaka ny farany ary afaka ampiasaina ho kitay ho. Indraindray ianao dia mila ny korontana ary avy eo dia afaka mamorona filaminana. More centralization ny hery foana amin'ny alalan'ny fitsipiky ny famoronana tena namorona olana ka nampahatezitra ny fanehoan-kevitra ary avy eo dia ny manan-karena vahaolana (Olana, fihetsika, vahaolana).
Raha hitanao ambony, ary koa ny mahazo ny alalan 'ny olona maro nahita fianarana pawns handray anjara amin'ny lalao rehetra, dia tsy hahatakatra ny tantara ara-politika izay tsy maintsy foana ny fiheverana ny demokrasia avo (mampiasa voaofana mpilalao malamalama amin'ny lahateny), fa mahatakatra Ankoatra izany, dia mihatra amin'ny vondron'olona mpanohitra na manam-pahaizana manokana sy manam-pahaizana ao amin'ny tavoahangy ihany koa izany. Dia manomboka ny mahita ny fomba ny haino aman-jery dia afaka milalao sarintsariny adihevitra sy ny tantara mba hiaro anao any an-tsaha ny maso hery ankavia, havanana, liberaly, maitso, mavo, volomparasy (ary ny sasany hafa). Tsy tokony hanana hevitra ianao handaminana ny fanoheranao manokana na hiala amin'izay efa nolalovanao. Tokony hanohy hino ny demokrasia ianao, mandehana mankany amin'ny vatom-pifidianana ary manohy ny asany. Tokony mahazo tezitra kely, dia izany aina kokoa fa hiaraka fikatsahana mpanohitra, satria dia ny birao manontolo dia mbola eo ambany fanaraha-maso ny asa fanompoana izay mitarika azy rehetra: ny Holandey fanompoana miafina antsoina hoe AIVD. Tsia, tsy ho an'ny fiarovana anao izany; Eto dia ny mitazona anao soa aman-tsara ao amin'ny sehatry ny hery mifehy.
Ary ianao koa manomboka mahatakatra ny antony Tijs Van davaky Brink - fantatrareo, ny EO mpanolotra ireo tsy azo antoka fa tena mamy tarehy grin eo an-dohany - dia afaka lovia ny vaovao fiovan'ny hery tsaha, araka ny nambara ao amin'ny manaraka bitsika. Natao fa mijery tele mba azo baikoina indray toy ny tapa-damba vaovao Truman Show. Indray mandeha dia nisy mpilalao fanta-daza nipoitra izay niova avy tamin'ny finoana silamo ho amin'ny finoana silamo. Ho azo itokisana ve izany? Izany no fikasana. Na izany aza dia sahy miteny aho fa ny rehetra dia manana ifandraisany amin'ny paradigma havia havia. Ny Silamo ao amin'ny firenena dia tokony hatolotra miaraka amin'ny fiheverana fa misy ny olona izay nahitàna hifidy ny lafiny. Ny fihenjanana tsy maintsy naorina avy any amin'ny farany ankavia sy ny tafahoatra tsara sy ny mety kokoa rehefa afaka mifindra forcefield B 1 ny pawns hery voaofana saha A, toy izany koa ny savony mahaliana kokoa. Ny andraikitra andrasana Jorama Van Klaveren, dia satria izy tsy maintsy mampiseho ny fomba mampidi-doza ny PVV foto-kevitra sy ny toy izany tiantsika ny hahita bebe kokoa fampisehoana sy fifanakalozan-kevitra. Theater 2.0 ao La Haye eo ambany fitarihan'ny AIVD. Aza milavo lefona!
Androany dia mitondra vaovao mahagaga isika: MP MP15 taloha, kristiana ary #didd-commentator @JoramvKlaveren lasa silamo.
Nitantara ny tantarany izy @DitisdeDag (Ora 18.30, @NPORadio1) de @NieuwLicht (Ora 22.55, @NPO2) pic.twitter.com/AU4eRshd1j
- Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) Febroary 4 2019
Lisitry ny rohy loharano: wnl.tv
Inona marina ny famonoan-tena ataon'ny mpikambana ao amin'ny filankevitra PVV Willie Dille ao The Hague?
Ny finoana silamo koa dia manamarika ny sata satriny Satin
Inona no marina momba ny fanehoana ireo ankizy Miozolomana Amsterdam taorian'ny fampihorohoroana Bruxelles?
Ny finoana silamo koa dia ahitana ny satelita Saturn 2
Tags: niova fo, niova fo, Featured, volen'ny from diplaoma, Islam, Joram van Klaveren, Muslim, PVV, PVV any, PVVer, tijs van den brink
4 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 29
Mediacircus, ny Huichelshow, De Bittere ny marina ny fomba entintsika any amin'ny idd sy mass
Ny 1 dia nisarika ny sain'ireo Media sy niantso ny sekta club rehefa nivoaka ny moske izy, tsaroanao: Mr. Mr. Honing Abdelkarim joker.
Ary ankehitriny, ireo Joram ireo dia somary fotsy ny nifiny Joker dia niova fo indray, mety rahampitso Rutte miaraka amin'ny lamba fitondra amin'ny lambany, izay mahafantatra 🙂
4 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 30
Raha mahita ny olona fa isika rehetra dia tao anaty sambo iray (na sambo 😉) dia tsy ho haingana haingana ianao hisafidy lafiny iray. Na silamo na kristianina na jiosy ianao dia tokony ho tsapanao fa misy ifandraisany amin'ny andriamanitra dualista. Ilay andriamanitra izay saika tonga any amin'ny lohahevitra amin'ny lahatsoratra tsirairay. Lucifer ilay anjely noforonina ambony indrindra, izay natao sorona mba hamoronana ny tontolo iainana. Ao anatin'izao tontolo izao dia tsy misy ilay Andriamanitra marina ary izany no noeritreretin'i Losifera. Indrisy fa ho azy sy ny fankasitrahantsika ho antsika no anambaràn'Andriamanitra / fifandraisana ao anatintsika. Ny hany zavatra tsy maintsy ataonao dia ny hianjera izany. Afaka misafidy ianao raha te hijanona eto (android) ao amin'ny tontolo ambany ary manaova zavatra mifanaraka amin'izany. Azonao atao koa ny mamela ny toetranao ratsy izay ao amin'ny DNA-nao eto amin'ny tontolo iainana ary manavotra. Tsy maintsy manao izany ianao ary tsy mino ny tantaran'ny fanavotana ampiharina (dia tsy mila manao na inona na inona ianao). Ny hendry avy any Losifera dia nanolana ny zava-drehetra ary nahatonga ny rehetra hino fa i Jesoa no zanany. Noforonina araka ny sary isika, izany no antony mahatonga antsika roa ihany koa. Ny antony nandefasana an'i Adama (na atoma) sy i Eva avy ao amin'ny zaridainan'i Edena dia satria manana ny fifandraisany amin'Andriama- nitra izy ireo ivelan'ity teboka ity. Izany no mahatonga azy ho masiaka satria midika izany fa afaka mandositra isika ary midika izany fa tsy misy intsony ny tontolo iainan'ny maty. Raha mijery izany tahaka izao aho, dia mbola hivezivezy eto amin'ny tontolo iainana (mety ho mandrakizay) fa miaraka amiko kosa aho ary te hivoaka. Azontsika jerena amin'izao fotoana izao ny fomba hitodihan'izao tontolo izao amin'ny andriamani-diso ary hilalao an'Andriamanitra.
Raha mijery an'ity tontolo ity amin'ny mason'ilay Andriamanitra marina ianao, dia ho azonao izany ary avy eo dia azonao atao ny mamihina mora foana ireo fehezin'izao tontolo izao.
Amin'izay koa dia mahafinaritra kokoa ny fiainana satria ampy ny hankafy. Ataovy azo antoka fa hampiakatra ny haavony avoakanao ianao fa tsy afaka manakaiky anao any ambany any ambanin'ny tany ny fahita matetika!
4 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 51
Van Klaveren 500% Aiviver! Ary Aivders misy mba hiarovana ny toe-quo ny fitondrana ny mahazatra ahiahiana sy foana fa tsy ho ny olon-tsotra ho any beschermen.Van Klaveren niantso ny tenany ho "kristianina" dia tsy ho ahy dia manaraby satria manana tena hafa fiaviana . Ny fitaka sy ny fitaka rehetra.
Raha ny momba ahy manokana, omaly, ny fiovan'ny fitondrana ara-dalàna miaraka amin'ny demokrasia tena izy, repoblika iray, zon'olombelona tena izy. Afaka miaina ao amin'ny firenena tena malalaka isika izay ahazoan'ny tombontsoan'ny vahoaka tsotra fa tsy ny maha-zava-dehibe ny ahiahiana mahazatra.
5 Febroary 2019 ao amin'ny 13: 39
Mijery manokana ny fandaharana famelabelarana amin'ny antsipiriany amin'ny antsipirihany amin'ny docu raha toa ny mpilalao 2 ao anaty fiara mitondra fiara ho an'ny fiangonana. Toa midika fa ny vondrona havanana amin'ny elatra havanana any Holandy dia mety ho lasa lehibe loatra ary dia toy izany no miteny ny feo fanovàna (fandaharana subliminal): "Miala sasatra", "miala amin'ny ilany havia" ...
« Ny mpandika lalàna Celine Dion NuNuNu 'New Order' ("gender neutral")
Ny fampielezan-kevitra lainga amin'ny haino aman-jery manodidina an'i Venezuela »
Total visits: 8.593.253
Camera 2 op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Riffian op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
ZalmInBlik op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Diniho fotsiny ny antony mahatonga ny afo Notre-Dame
Mifandraisa anjara amin'ny 1.576 hafa